प्रधानन्यायाधीश राणामाथि शृंखलाबद्ध र नियोजित आक्रमणः पृष्ष्ठभूमिमा को ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि शृंखलाबद्ध र नियोजित आक्रमणः पृष्ष्ठभूमिमा को ?
२०७८ आश्विन २५, सोमबार १३:५०:००
काठमाडौँ । यतिखेर देशको न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि जतिसक्दो आक्रमण गर्न सक्यो, उति नै लोकप्रिय भइन्छ भन्ने सोचका बीच अनौठो होडबाजि चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई एक पूरै असान्दर्भिक र विशुद्ध राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर प्रहार गरिँदै छ । यो प्रहारको होडमा मिडियादेखि राजनीतिकर्मी, नागरिक अगुवा भनिने व्यक्ति र कतिपय कानुन व्यवसायी समेत तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । मानौँ, यसमा पछि परियो भने भोलि समाजमा अस्तित्व नै रहने छैन ।
अहिले तत्काल लोकप्रिय र चर्चित बनिहाल्नका लागि यो एउटा सजिलो मुद्दा होला । सरकारको विरोध गर्ने बहाना नपाएकाहरुलाई प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच लेनेदन भयो भन्दै उछित्तो काढ्ने मौका मिलेको छ । टीभी र एफएमहरुमा घोक्रो फुलाएर कराउनेहरुको कुनै कमी छैन । कतिपयले न्यायालय गिँजोल्ने आफ्नो स्वार्थ सिद्धि यही मौकामा गर्ने भन्ने सपना पनि देखेका हुन सक्छन् ।
खासगरी प्रधानन्यायाधीश राणालाई विवादित बनाएर न्यायालयभित्रैबाट बाहिरिएका केही खेलाडीहरु आफूअनुकूलको गोटी चाल्ने मनसुवामा देखिन्छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बाहिरै बसेर न्यायालय चलाउन चाहेको पछिल्ला वर्षका उनका केही निजी र केही सामूहिक वक्तव्य तथा क्रियाकलापबाट स्पष्ट हुन्छ । कतिपय मुद्दामा उनले सामूहिक गुटबन्दी गरी अदालतबाहिरैबाट फैसला लेखिदिए । उनका कतिपय फैसला सार्वजनिकरुपमै हुन्छन् भने कतिपयचाहिँ एकैपटक न्यायाधीशका आदेश र फैसलामा पढ्न पाइन्छ ।
अहिले पनि उनले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई घरमै बोलाएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उचालिरहेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध वक्तव्य दिन लगाउनेदेखि अदालतभित्र गुटबन्दी चर्काउनेसम्मका रणनीतिक गोटीहरु चालेको देखिन्छ । अहिलेसम्म न्यायाधीश दीपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र प्रकाश राउत उनको क्लबमा प्रवेश गरेको पाइएको छ । यसअघि सपना मल्ल प्रधान, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरि फुयाँल लगायत उनका इमानदार चेला थिए । यी सबैलाई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उचाल्ने, सार्वजनिक वक्तव्य दिन लगाउने र भित्र पनि गुटबन्दी चर्काएर नेतृत्वलाई कमजोर एवं असफसिद्ध बनाउनेसम्मको योजना बुनिएको छ ।
पर्दापछाडि जतिसुकै षड्यन्त्र रचिए पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई चुनौती दिन सजिलो भने छैन । एक त राणाले यस्ता धेरै हण्डर ठक्करको सामना यसअघि नै गरिसकेका छन् । उनलाई पुनरावेदन अदालतमा छँदै घर पठाउन खोजिएको थियो । त्यसबेला पनि ठूलै शक्तिकेन्द्रको जोडबल थियो । त्यसलाई पराजित गरेर उनी अगाडि बढे ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुन नदिन पनि उस्तै चलखेल भएकै हो । तर, उनले आफ्नो मात्र होइन, उनका पूर्वाधिकारीको समेत कार्यकाल पनि आफैले चलाउनुपर्ने अवस्था आयो ।अहिले राणालाई चौघेरामा पार्न जोजो लागिपरेका छन्, नैतिकता र इमानदारिताको कसीमा उनीहरु झन् गएगुज्रेका छन् । हरेक गौँडामा उनीहरु चुकेका छन् । र, ती सबैका खुट्टी राणाले राम्रोसँग पहिचान गरिसकेका छन् । त्यसैले नेपालका कुनै पनि राजनीतिक र अन्य शक्तिले राणालाई सहजै हल्लाउन सक्ने देखिँदैन ।
राणामाथि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर दोस्रो वरीयताका दीपककुमार कार्कीलाई अघि सार्ने प्रयत्न पनि हुन सक्छ। तर, यो पनि सहजै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको संसदीय संरचना हेर्दा कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने तागत एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मात्र छ । तर, ओलीले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशका हकमा कतै पनि हलुका टिप्पणी गरेको पाइँदैन । बरु कांग्रेसभित्रका केही संस्थापनविरोधी नेताहरुले महाधिवेशनमा देउवालाई हराउने उद्देश्यले न्यायालयमाथि राजनीति गरेको देखिन्छ । यसरी नेपथ्यबाट हतियार चलाउनेहरुले सामुन्नेमा आएर प्रहार गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । महाभियोग भन्ने कुरा खुलेर साझा कागजमा हस्ताक्षर गरेर मात्र हुन सक्छ । यो हैसियत न सिंगो कांग्रेस पार्टीसँग छ, न त कुनै कांग्रेसी नेतासँग । संसदको यो संरचना रहेसम्म राणा सुरक्षित छन् ।
यहाँ मूल प्रश्न भने राणा सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने होइन । मूल प्रश्नचाहिँ राणामाथि भइरहेको यो प्रहारका पछाडि पवित्र उद्देश्य छ कि छैन भन्ने हो । अहिले जसरी मिडियाबाजी र हल्लाखल्ला गरिँदै छ, त्यसका पछाडि सफा नियत छ भनेर मान्न सकिँदैन । मन्त्री खान नपाएका, देउवालाई जसरी हुन्छ विवादमा तानेर महाधिवेशनमा कमजोर बनाउनुपरेका र हिजो ओलीका पालामा भएका संवैधानिक नियुक्ति उल्टाएर त्यसमा केही आफ्ना मान्छे मिसाउने दाउमा रहेकाहरुले न्यायालय र न्यायिक नेतृत्वलाई तारो बनाइरहेका छन् । तर, यिनको योजना सहजै सफल हुने देखिँदैन ।
यहाँनिर सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यो हो कि पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार र मर्यादित भएर बस्नुपर्ने व्यक्ति कल्याण श्रेष्ठ युरोपियन युनियनको कापी, कलम र मसीमार्फत् देशको संस्था र व्यवस्थाविरुद्ध वक्तव्य तयार गर्दै छन् । बाह्य शक्तिको इशारामा आफ्ना देशभित्रका संस्थालाई बदनाम र कमजोर बनाउँदै आफ्नो इच्छामा नचाउने षड्यन्त्रमा लागेको पाइन्छ । यस्तो देशघाती र आफ्नै संस्था तथा उत्तराधिकारीप्रतिको बेइमानीपूर्ण क्रियाकलाप निन्दनीय छ ।